အကြောင်းရင်း - ကျား၊
အကြံပေးခြင်း ၀ န်ဆောင်မှုများ
ကျွန်ုပ်တို့အကြောင်း - ကျွန်ုပ်တို့၏ပန်းတိုင်
မိဘများ - ကျွန်ုပ်တို့၏အခွင့်အရေး။
မသက်ဆိုင်ကြောင်းရှင်းလင်းချက် & မူပိုင်ခွင့်
Safe ကျောင်းများအစီအစဉ်သည်သြစတြေးလျားရှိကျောင်းများသို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာဝိသေသလက္ခဏာများဖွံ့ဖြိုးလာချိန်နှင့်လိင်စိတ်ရှုပ်ထွေးမှုများကိုထိခိုက်လွယ်သောအချိန်များတွင်ကလေးများအားလိင်တူချစ်သူများအားလိင်ကွဲပြားမှုဆိုင်ရာသဘောတရားများကိုသင်ကြားပေးနေသည်။ သြစတြေးလျသည်ကျားမဆေးခန်းများသို့ခေါ်ဆောင်သွားသောကလေးအရေအတွက်တွင်ပေါက်ကွဲမှုဖြစ်ပွားခဲ့သည်။ CAUSE ၀ က်ဘ်ဆိုက်တွင်ပါ ၀ င်သည့်ပါမောက္ခဂျွန်ဝှိုက်ဟဲလ်၊ ပါမောက္ခ Dianna Kenny နှင့်အခြားသူများမှလိင်ပြောင်းလဲခြင်း၊ ကျား၊
လိင်ဆရာ ၀ န်များကဆရာ ၀ န်များကဖော်ပြသည်။
Gender Dysphoria အကြောင်းပါမောက္ခ John Whitehall က Quadrant Magazine တွင်ရေးသားခဲ့သည်။
ဟော်မုန်းပိတ်ဆို့ခြင်းနှင့် Transgender အရာအားလုံး။
လိင်တူချစ်သူဟောင်းတစ် ဦး နှင့်လိင်တူချစ်သူဟောင်းတစ် ဦး နှင့်လိင်တူချစ်သူများဟောင်းတို့၏လိင်တူချစ်သူဟောင်းများဘဝမှထွက်ခွာသွားခြင်းအကြောင်းပြောဆိုခဲ့သည်။ နောက်ထပ် ၁၃ ယောက်ကအကြံပေးခြင်းသည်သူတို့ကိုမည်သို့ကူညီခဲ့ပုံနှင့်ပတ်သက်သည့်သူတို့၏ရေးသားထားသောပုံပြင်များကိုမျှဝေသည်။
Walt Heyer ရဲ့လိင်ပြောင်းလဲမှုနောင်တ Website
Walt Heyer သည်လော်ရာအမျိုးသမီးတစ် ဦး အဖြစ် ၁၀ နှစ်ကြာနေထိုင်ခဲ့ပြီးလိင်ပြောင်းလဲခြင်းမပြုနိုင်သေးကြောင်းအသိအမှတ်ပြုခဲ့သည်။
ကျား၊ မရေးရာအယူအဆများဆိုင်ရာ Safe Schools အစီအစဉ်ကိုမူလကအနိုင်ကျင့်ခြင်းပြtackနာကိုဖြေရှင်းရန်ဒီဇိုင်းထုတ်ခဲ့သောကြောင့်ရပ်တည်မှုအားရသူလူစုများကတာဝန်ယူခဲ့သည်။
၎င်းသည်ဖြစ်လာမည့်အရာသည်၎င်းသည်ငွေကြေးထောက်ပံ့ရန်အတွက်နယ်နိမိတ်ကိုကျော်လွန်သွားစေသည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်အတူတကွရပ်တည်။ ညွန့်ပေါင်းဖက်ဒရယ်အစိုးရအားဤအစီအစဉ်အတွက်ရန်ပုံငွေဖယ်ရှားခြင်းနှင့်၎င်း၏လက်ရှိပုံစံဖြင့်ထောက်ခံသည်။
လုံခြုံသောကျောင်းများမဟာမိတ်အဖွဲ့မှစီစဉ်သောအစီအစဉ်သည်လူငယ်များနှင့်ကလေးများကိုအလွန်အားနည်းသောအသက်အရွယ်တွင်ပစ်မှတ်ထားပြီး ၄ င်းတို့အားသူတို့၏မိသားစုရိုးရာနှင့်ရပ်ရွာလူထု၏တန်ဖိုးများကိုခွဲခြားရန်နိုင်ငံသားများအားလုံးကိုထိန်းသိမ်းရန်ရည်ရွယ်သည်။ ဤအစီအစဉ်မှသင်နှင့်လိင်၊ လိင်စော်ကားမှုအပေါ်အခြေမခံသောပါဝင်မှုနှင့်လက်ခံမှုကိုကိုင်တွယ်ရန်ပိုမိုကောင်းမွန်သောရည်ရွယ်သည့်အစီအစဉ်တစ်ခုသို့သင်အာရုံလွှဲရန်တောင်းဆိုပါသည်။
ကလေးဘဝကျား, မ Dysphoria ။ မှတ်တမ်းနှင့်အတူ 12 ဗီဒီယိုစီးရီး။
လိင်ရှုပ်ထွေး။ ဟော်မုန်းကုထုံး။ လိင် Reassignment ခွဲစိတ်။ စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာတိုင်ပင်။ Transgenderism ရှင်းလင်းချက်။
ပါမောက္ခဂျွန် WHITEHALL ။
ဗွီဒီယိုများကိုအင်္ဂလိပ်ဘာသာဖြင့်ကြည့်ပါသို့မဟုတ်သင်၏ဘာသာစကားဖြင့်မှတ်တမ်းများကိုဖတ်ရန်ဤစာမျက်နှာရှိ Google Translator ကိုသုံးပါ။
မဆိုမိဘကလေးတွေကိုပြုစုပျိုးထောင်အခါ, အဲဒီမှာကိုင်တွယ်ရန်ခက်ခဲဖြစ်နိုင်သည့်ဒေသများအများကြီးဖြစ်ကြသည်ကို၎င်း, တစ်ဦးချင်းစီကလေးသည်သူတို့ကိုယ်ပိုင်စောင့်ရှောက်မှုအစီအစဉ်ကိုလိုအပ်နေသည်ဟုသိတယ်။ ဒါပေမယ့်ကျနော်တို့အားလုံးထို့ကြောင့်ကျနော်တို့ကိုသူတို့နားလညျနိုငျသောလမ်းအတွက်အန္တရာယ်များ၏သားသမီးများကသတိပေးမီးအန္တရာယ်ကြောင်းကိုငါသိ၏။ ကျနော်တို့ကသူတို့ကိုမီးသူတို့ကိုကြောင့်နှင့်အတူဆော့ကစားခွင့်အားဖြင့်အန္တရာယ်ရှိကြောင်းသင်ယူဖို့ခွင့်မပြုပါဘူး။ အဆိုပါအမာရွတ်များနှင့်နာကျင်မှုကဤအတိုင်းဖြစ်လေ၏လျှင်ပျက်စီးဆုံးရှုံးမှုပြုမိခဲ့ကြပေသည်ရှည်လျားပြီးနောက်ခံစားခဲ့ရမည်ဖြစ်သည်။ ထိုနညျးတူ, အဘယ်ကြောင့်ငါတို့သည်ငါတို့၏ကလေးများမူလကပင်အပျိုဖော်ဝင်, ရငျ့နှင့်ဖွံ့ဖြိုးရေးကိစ္စရပ်များမှတဆင့်၎င်းတို့၏လမ်းအလုပ်လုပ်ဖြစ်ဖို့လိုအပ်တဲ့လမ်းညွှန်မှုပေးဘို့မိမိတို့မိသားစုယူနစ်အတွက်သူတို့ရဲ့ယုံကြည်မှုရပ်ဆိုင်းထားရန်ကလေးများကိုမေးရာအစီအစဉ်များတွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခံရဖို့ခွင့်ပြုဖို့တောင်းရပါမည် ကောင်းစွာမတူကွဲပြားမှုများ၏ဆန့်ကျင်နိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့်လက်ခံမှု၏အတိုင်းအတာထက်ကျော်လွန် "ပညာရေး" ကိုဘာသာရပ်။ သို့သျောလညျးဒီကို Safe ကျောင်းများအစီအစဉ်လုပ်ဖို့ကျွန်တော်တို့ကိုမေးတယ်အရာဖြစ်တယ်။
သြစတြေးလျပါလီမန်အမတ် Mr. Andrew Haste
ပါလီမန်အမတ်အင်ဒရူးဟတ်စတီကသြစတြေးလျပါလီမန်တွင်ရှိသော“ လုံခြုံသောကျောင်းများ” အစီအစဉ်ကိုပြောဆိုသည်။
အစီအစဉ်ကိုသဘောပေါက်ပြီးကစားကွင်းအဆင့်ကိုညီအောင်လုပ်ပါ - ဒီအစီအစဉ်ကိုတံခါးပိတ်နောက်ကွယ်မှနှင့်မိဘရွေးချယ်မှုမရှိဘဲသာအဘယ်ကြောင့်သင်ကြားရကြောင်းရှာဖွေပါ။ အကယ်၍ ကျွန်ုပ်တို့၏ကလေးများ၏လုံခြုံမှုသည်မည်သည့်အရေးပါမှုမျှမဖြစ်ခဲ့ပါကလူငယ်များအားကြီးပြင်းလာခြင်းနှင့်ပတ်သက်ပြီးသက်ဆိုင်သူများအားလုံးကကျွန်ုပ်တို့သည်ကွဲပြားခြားနားသောလူသားမျိုးနွယ်အပေါ်ဖြစ်ကြောင်း၊ နည်းလမ်းအားလုံးတွင်တန်းတူဖြစ်သည်ကိုနားလည်ရန်နှင့်ပွင့်လင်းမြင်သာမှုရှိသင့်သည်။ သင်ရိုးညွှန်းတမ်းကိုမိတ္တူတစ်စောင်တောင်းပါ၊ သင်၎င်းင်း၏အကြောင်းအရာများကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်ဆန္ဒရှိသည့်ကျောင်းတစ်ကျောင်းကိုသင်အလုံအလောက်တွေ့ရှိပါကသင့်ရှေ့မှောက်ကျွန်ုပ်တို့ချမှတ်ထားသည့်အရေးယူဆောင်ရွက်မှုခေါ်ယူခြင်းကိုနားလည်ရန်အဆင်သင့်ဖြစ်ပါ။
ကို Safe ကျောင်းများ၏ Roz ရပ်ကွက်ဗိသုကာပညာရှင်ကို Safe ကျောင်းများနိုင်ကျင့်တွေအကြောင်းမဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
“ Safe Schools” အစီအစဉ်၏ Roz Ward မှဗိသုကာကလုံခြုံသောကျောင်းများသည်အနိုင်ကျင့်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ မဟုတ်ကြောင်းဝန်ခံသည်။
သငျသညျမြားအဘို့အမရသေးသောအပျိုဖော်ဝင်ခြင်းနှင့်ရငျ့၏ဝန်ခံရမည်ကိုမကြာခဏမတည်ငြိမ်သောနှင့်ရှုပ်ထွေးဇာတ်စင်အားဖြင့်သင်တို့၏သားသမီးတို့သင်ပေးနှင့်လမ်းပြမိဘတစ်ဦးအဖြစ်သင့်အခွင့်အရေးများလက်နက်ချဖို့အဆင်သင့်, တက်ကြွစွာပါ! ယခုဤစမ်းသပ်နှင့်ကှဲအစီအစဉ်၏ဖယ်ရှားရေးတို့အတွက်အထောက်အပံ့ join ဖို့အချိန်ဖြစ်ပါသည်။
Cella ၏ကလေးများအကြောင်းနှင့်သူတို့၏ကျောင်းရှိ“ လုံခြုံသောကျောင်းများ” အစီအစဉ်။
သင်၏ကျောင်းတွင်တက်ကြွစွာပါဝင်ပါ။ လူမှုအသိုင်းအ ၀ န်းမှထူးခြားသည့်လူသားများကိုဂုဏ်ပြုရန်အတွက်လက်ရှိသူတို့အနေဖြင့်မည်သည့်ရပ်ရွာလူထု၏အစပြုဆောင်ရွက်မှုများကိုလေ့လာပါ - ကျောင်းများရှိသူတို့၏လူမှုအသိုင်းအဝိုင်း ၀ င်များအားလုံးကိုထောက်ပံ့ရန်စီစဉ်ထားသည့်အဖြစ်အပျက်များစွာကိုပူးပေါင်းပါ ၀ င်ဆင်နွှဲပါ။ ဖြစ်ခြင်းများအတွက်အခြေခံအဖြစ်ဝိသေသလက္ခဏာ။
သင်၏ကျောင်းသင်ကြားမှုနှင့်ကလေးများနှင့်လူငယ်များအား၎င်းတို့အသုံးပြုသောအစီအစဉ်များအားလုံးအားလက်ခံခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ပုံစံများအားလုံးတွင်တန်းတူညီမျှခြင်း၊ သနားခြင်းကရုဏာနှင့်ပုံစံအမျိုးမျိုးရှိကွဲပြားခြားနားမှုကိုနားလည်ခြင်းစသည်တို့ကိုရှာဖွေပါ။ သင်၏ကျောင်းကိုအသိပေးခြင်းနှင့် SAFE သည်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာထိတွေ့မှုနှင့်တန်းတူမဟုတ်ကြောင်းနားလည်ခြင်းဖြင့်ကူညီခြင်း။
SAFE ဟူသောဝေါဟာရကိုပြန်ယူပါ။ ၄ င်းတို့ကိုနားလည်သဘောပေါက်ခြင်းနှင့်သိလိုစိတ်ကိုသဘာဝအလျောက်စွဲမက်ခြင်းထက်ကျော်လွန်သောကလေးများကိုဖြည့်စွက်ရန်မှာစိတ်ကူးယဉ်မှုတစ်ခုမဟုတ်ကြောင်းသေချာစေပါ။ ကလေးများသည်မတူညီသောနှုန်းဖြင့်ရင့်ကျက်သောကြောင့်ဤအစီအစဉ်ကခွင့်မပြုပါ။ ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းသည်ကလေးသူငယ်များစွာသည်ရွေးချယ်မှုများ၏ကြီးမားမှုနှင့်သက်တမ်းကိုသဘောပေါက်ရန်အဆင်သင့်မဖြစ်သေးမီသဘောတရားနှင့်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုတွန်းအားပေးသည်။ ရင့်ကျက်မှုနှင့်လိင်ရင့်ကျက်မှုကိုအတင်းအကျပ်မပြုလုပ်ရပါ။ ဤအစီအစဉ်ကမိဘများပါ ၀ င်ပတ်သက်မှုကိုဖယ်ရှားသည့်နည်းလမ်းသည်ကျွန်ုပ်တို့အားပေါ့ပေါ့တန်တန်ထိုင်ပြီးလက်ခံသင့်သည့်ကျန်းမာရေးအစီအစဉ်တစ်ခုမဟုတ်ပါ။ မဟုတ်ဘူးဟုပြောပါ သင်၏ကျောင်းကသင်၏ဆုံးဖြတ်ချက်ကိုသတိထားမိကြောင်းသေချာအောင်လုပ်ပါ။
သင်၏သားသမီးကျောင်းတွင်သေးဘူးဆိုရငျ, သူတို့ကိုလာရောက်လည်ပတ်ပြီးရပ်နားသို့မဟုတ်အခမဲ့ကာလအတွင်းမှတဆင့်လမ်းလျှောက်ဖို့တောငျးဆိုခြင်းအားဖြင့်သင့်ဧရိယာ၌ကျောင်းများအကြောင်းကိုထွက်ရှာပါ။ အမြိုးသားအချင်းစီကတခြားတွေနဲ့အပြန်အလှန်ဘယ်လိုမြင်သဘာဝလက်ခံမှုကလေးများအရေးယူမှုရှိအခွားသူမြား၏တိုစောင့်နေကြလော့။
သင့်ဒေသခံစာရေး အမတ်သို့မဟုတ်ပရီးမီးယားလိဂ် သူတို့ကိုသင်တစ်ဦးထက်ပိုသောပွင့်လင်းခြင်းနှင့်တက်ကြွသောအစီအစဉ်၏မျက်နှာသာအတွက်ဒီ program ကိုဖယ်ရှားဖို့အတွက်ဖက်ဒရယ်အစိုးရရပ်တည်ချက်ကိုထောကျပံ့သိကြကုန်အံ့။ SAFE လိင်သတိထားထက်ပိုဆိုလိုဖို့နဲ့အားလုံး၎င်း၏ပုံစံများအတွက်လက်ခံမှုထည့်သွင်းရန်အဘို့အ။ မိသားစုယူနစ်ကို support ကြောင့်လာမယ့်မျိုးဆက်အကို Safe ကျောင်းများအစီအစဉ်ကိုကနေအဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်ရှာကြံသောတန်ဖိုးများနှင့်အဓိကနားလည်မှုဆုံးမဩဝါဒ ပေး. အတွက်လုပ်ငန်းလည်ပတ်မှုခွင့်ပြုထားတဲ့တစ်ဦးကပရိုဂရမ်ဖြစ်ပါတယ်။
သငျသညျမဲပေးမီသေချာသငျသညျကိုသူတို့ထောက်ခံတံ့သောအရာကိုတစ်ဦးချင်းစီကိုယ်စားလှယ်လောင်းကို support နှင့်အစီအစဉ်များကိုသိပါစေ။ အလေးအနက်ထားသင့်ရဲ့မဲကိုယူနှငျ့သငျမိသားစုအခွင့်အရေးများ၏အဝတ်တန်ဆာကိုချွတ်သည်းခံမည်မဟုတ်သောကိုယ်စားလှယ်လောင်းတစ်ဦး Message ပေးပို့။
ကျွန်တော်ပထမဦးဆုံးကသူတို့ကိုပြောပြလျှင်အစိုးရမှသာကျနော်တို့လိုချင်တာတွေပေးနိုင်ပါသည်။ နားလည်သဘောပေါက်နှင့်သင့်ကလေးအတွက်လမ်းပြမိဘအဖြစ်သင့်ရဲ့စွမ်းရည်ကိုဆင်နွှဲ။ သင်သည်သင်၏အခန်းကဏ္ဍဆက်သွယ်နှင့်နားလည်အတွက်အခက်အခဲရှိခြင်းနေတယ်ဆိုရင်, ရှာနှင့်ဒေသခံအသိုင်းအဝိုင်းစင်တာများအားဖြင့် run ထောက်ခံမှုအစီအစဉ်များကိုပြုစုပျိုးထောင်ခြင်းအတွက်စာရင်းသွင်း။ ဒါဟာသင်တို့၏သားသမီးသင်တို့အပေါ်မှာက၎င်း၏တံခါးများပိတ်ထားခြင်းနှင့်ဒါခေါ်ကို Safe ကျောင်းများ option ကိုအားဖြင့်တွန်းအားပေးသည့်လျှို့ဝှက်နှင့် "privacy ကို" အားပေးခဲ့သည့်တစ်ဦးအစီအစဉ်တွင်ပါဝင်ပတ်သက်ခြင်းကိုခံကြစေရန်အန္တရာယ်ကင်း option ကိုမဟုတ်ပါဘူး။
ကြှနျုပျတို့ကိုဆကျသှယျရနျ။ အီးမေးလ်: cause.victoria@gmail.com
CAUSE ကိုလှူဒါန်းပါ။ ဘဏ်: NAB BSB: 083-547 ACC: 87-690-0206
မူပိုင်ခွင့်© 2021 CAUSE (မလုံခြုံသောလိင်ပညာရေးဆန့်ကျင်ရေးညွန့်ပေါင်း)